तराई मधेशमा नेतृत्व विकासबारे छलफलमा सहभागी हुँदा || विचार
तराई मधेशमा नेतृत्व विकासबारे छलफलमा सहभ...
तराई मधेशमा नेतृत्व विकासबारे छलफलमा सहभागी हुँदा
Dharana remove_red_eye 90
वितेको साता आफू भन्दा बौद्धिक व्यक्तित्वहरु वीच कार्यक्रम सञ्चालकको हैसियतमा रहेर प्रस्तुत भएर विज्ञानले विकास गरेको प्रविधिलाई नयाँ ढंगले सदुपयोग गरियो । प्रत्यक्ष रुपमा फेसबुकमा लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थिएन, पहिलो अनुभवका रुपमा यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुँदाको अनुभूति यहाँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक लाग्यो ।
राजनीतिक विश्लेषक सिकेलाल र प्रा.डा. कृष्ण हाछेथुलाई वक्ताको रुपमा सञ्चालन गर्दा मलाई एक किसिमले गौरवको अनुभूति पनि भयो । मधेशमा नेतृत्व विकासको प्रश्न र यसको ऐतिहासिक पक्षबारे छलफल थियो । मलाई तराई मधेशको नाम किन यति लामो बनाइएको होला भन्ने जिज्ञाशा लागि रहन्छ । पहिले तराई मात्र भनिन्थ्यो, पछि मधेश शब्द जोडिएर आयो । मधेश शब्दले विखण्डनका भावना पनि विकसित गरायो । अधिकार पनि बुझायो । विभेदको महशुस पनि गरायो । तर मलाई भने तराई—मधेश दुवै शब्द जोडेर उच्चारण गर्न ठीक लाग्छ । परम्परागत शब्दको पनि सम्बोधन हुने र नयाँ विकसित भएको शब्द पनि प्रयोग हुने भएकाले यो शब्द लामै भए पनि यही शब्द प्रयोग ठीक जस्तो लाग्छ ।
तराई—मधेशको विकासको लागि तराई—मधेशकै बासिन्दा नेता बन्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालको सत्ता राजनीतिमा तराई—मधेशका नेताहरु धेरै पटक नेतृत्वमा पुगेका छन् । धेरैले सत्ताको हालीमुहाली गरेका छन् । तर तराई—मधेशका जनताको हितका निम्ति त्यो क्षेत्रको विकासका निम्ति तराई—मधेशका नेताहरुले केही गर्न सकेको पाइएन, आखिर किन ? यो गम्भिर प्रश्नले मलाई धेरै पटक सोच्न घच्घच्याएको छ ।
तराई—मधेशको विकास पनि समग्र नेपालको विकास हो भन्ने सोचको साथ काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । यस्तो नेतृत्व तराई—मधेशबाटै मात्र विकसित हुन सक्छ भन्ने सोच पनि विखण्डनबादी सोच हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले नेतृत्व जहाँको भए पनि समग्र नेपालको हित सोच्ने नेतृत्व आजको नेपालको आवश्यकता हो । यस्तो सोच भएको पार्टी नेपालको इतिहासमा नयाँ देखा परेको छ — जनता समाजवादी पार्टी । देशको आशा लाग्दो राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको यो पार्टीलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा बिशेष क्रियाशील बनाउन जरुरी छ भन्ने सोचको विकास यो पार्टीको नेतृत्वमा जरुरी छ । मधेशका मुद्दालाई मात्र ध्यान दिंदा क्षेत्रियताबादीको आरोप लाग्ने गरेका कारणबाट पनि मधेश केन्द्रीत सोचबाट माथि उठ्न जरुरी छ । तराई—मधेश भन्दा कष्टपूर्ण जीवन पहाडका नेपालीहरुले व्यतित गरिरहेका छन् । तराई—मधेशका जनता भन्दा अशिक्षित पहाडका जनता छन् । तराई मधेशका जनता भन्दा पिछडिएका हिमाल रपहाडका छन् । त्यसैले समग्र नेपाल र नेपाली जनताको बारेमा सोच्ने नेतृत्व आवश्यक छ । चाहे हिमाल र पहाडमा जन्मिएको वा तराई—मधेशमा ।
समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकता भएपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी हिमाल, पहाड र तराईको संगम जस्तो बनेको छ । यो पार्टीले तराई—मधेशका जनताको मात्र सोच्न थाल्यो भने हिमाल र पहाडको जनताको लागि सोच्ने कस्ले ?
हालको सत्तारुढ दलभित्र तराई—मधेशप्रतिको सोचाई ठीक छैन भन्ने कुरा हामीले महशुस गरिरहेका छौं । तर सीमा पारीबाट हुने तमाम किसिमका समस्याहरुको सामना गर्न तराई—मधेशका जनतालाई नै बाध्यता हुने गरेको छ । यो विषयमा सत्ता पक्ष जानकार हुन जरुरी छ । तराई—मधेशका जनताले सीमा रक्षा नगर्ने हो भने छिमेकी देशको अतिक्रमणबाट नेपालको अस्तित्व नरहने अवस्था छ । तराई—मधेशका बासिन्दाले वर्तमानमा कोरोना भाइरसको संकट समेत हिमाल र पहाडको बासिन्दाले भन्दा बढी सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाले पनि तराई—मधेशका जनताको समस्यालाई उजागर गर्दछ ।
हुन त भौगोलिक रूपमा सुगम भए पनि तराई मधेश विकासको दृष्टिकोणले दूर्गम नै मानिन्छ । मधेशका भित्री बस्तीमा अझै पनि रोग, भोक, अशिक्षा, अन्धविश्वास र असुरक्षाको अवस्था बिद्यमान नै छ । जनता गरिबीको मारमा पिल्सिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, यातायात, विद्युत र सञ्चार जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू यहाँका आम जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तराई – मधेशबाट नेतृत्वमा पुगेका नेताहरुले यस्ता समस्यामा के गरे ? यो अहम् प्रश्नका सामू अब जनता समाजबादी पार्टीले जवाफ दिने गरी आफूलाई प्रश्तुत गर्ने साहश लिनु पर्दछ । यस्ता बिषयहरुलाई राष्ट्यि मुद्दा बनाएर अभियानमा लाग्नु जरुरी छ । राजपा र समाजवादीबीच एकता हुँदा बित्तिकै मधेश केन्द्रीत राजपाको सांगठानिक हैसियत पनि अब देशव्यापी बन्न पुगेको छ ।
तराई–मधेशमा व्याप्त समस्याहरूका कारण लामो समयदेखि यहाँका जनतामा ठूलो असन्तुष्टि रहेको अवस्था छ । जनतामा एकात्मक शासन प्रणालीप्रति ठूलो आक्रोश पनि थियो । त्यसकारण जनआन्दोलन लगत्तै भएका मधेश आन्दोलनमा यहाँका जनता सक्रिय रूपमा सहभागी भएका थिए । तिनै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले नै अहिले सत्ताको स्वाद चाख्न पाएका छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो स्थान जमाउन पनि पाएका छन् । तर जनताको अवस्थाप्रति नेताहरु बेखबर जस्तै बनेको अवस्थाले पनि नेता कुन भू–भागमा जन्मेको हो भन्ने कुराले खाशै अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लागेको छैन । -जनधारणा साप्ताहिकबाट